I-Spaceball Zerogravity, iteknoloji enomdla kaJugetrónica | Iindaba zeGajethi
Lixesha lokonwaba, iidrones ziya zisanda ukuba ngabalinganiswa beendaba ezininzi, kodwa ayizizo zonke izinto ezaziza kubhabha kwaye zibhabhe, Singaba nexesha elimnandi kunye needrones zethu ngesandla kunye nemibono ethi iJugetrónica ifumaneke kubo bonke abasebenzisi. Ivenkile esekwe eMadrid inezixhobo ezimbalwa kwaye namhlanje sifuna ukubonisa enye yazo.
Hlala nathi kwaye ufumane iSpaceball Zerogravity, umdlalo onomdla oya kutshintsha umbono wakho kwezi ntlobo zeemveliso.
Este Itekhnoloji Yenzelwe ukunika umdlalo webhasikithi weklasikhi ukujija, ikwanofakelo olulula oluya kusivumela ukuba silisebenzise ngaphakathi nangaphandle, akukho mida xa kusiziwa okwexeshana. Ndimele nditsho ukuba bendikrokrela kuba iyimveliso yokuqala yezi mpawu eziwela ezandleni zam, hayi ngenxa yokuba idrone, esizamile kambalwa, kodwa ngenxa yento yokudibanisa oku Itekhnoloji ngemidlalo yekhulu njani ibhola yomnyazi. Ungayifumana kwii-euro ezingama-59,90 kwiwebhusayithi yayo ngale khonkco.
1 Izinto kunye noyilo lwemveliso
3 Umfowunelwa wokuqala kunye nokuseta
4 Iimowudi zemidlalo ye-Spaceball Zerogravity
5.1 Okubi kakhulu
5.3 Eyona nto ibhetele
Izinto kunye noyilo lwemveliso
Sifumana ukupakisha okukhulu ngokwaneleyo, ndicinga ukuba ubungakanani bebungenakuncitshiswa, kungekuphela ngenxa yomxholo, kodwa ngenxa yokuba idibanisa zombini iimveliso ezinkulu kunye nezinye ezincinci kakhulu. Kwindawo yokuqala sifumana i «Spaceball», eyenziwe ngeplastiki enentambo ene-drone encinci eneziphephethi ezine ezinezibane kwi-axis yayo. Le iya kuba yi "basketball" esiza kudlala ngayo kunye nento yokuqala etsala umdla wethu. Ngendlela efanayo, kwelinye icala sifumana isilawuli, esenziwe ngeplastikhi emnyama kwaye sinendawo yokudlala eya kusivumela ukuba siyiphathe imveliso, kodwa sihlala sigcina engqondweni ukuba iyakubhekiswa ngesandla sethu.
Iintambo ezimbini zokutshaja ze-USB
Ibhasikithi kunye nebhodi
Iibhetri ezi-2 zeSpaceball
Isangqa esimnyama esimnyama seSpaceball
Emazantsi siza kufumana iindawo ezimbalwa zokugcina, iibhetri, iitshaja ze-protagonist ze-USB, ibhaskiti yeplastiki ekhutshweyo eyenzelwe lo mdlalo othile kwaye idityaniswe ngokukhululekileyo. Ndikufumanisa kungenakwenzeka ukufaka i-Spaceball kwibhaskithi kwaye andikaqali nokutshaja isixhobo okwangoku. Kumxholo siza kufumana iindawo zokugcina izinto, kwaye okuninzi okuyimfuneko, Ukubethwa kakubi okunikwe kuvavanyo lwam lokuqala kubangele iringi egcina i-drone egxile ngaphakathi kwi-Spaceball ukwaphula ukusetyenziswa kwayo okokuqala, ukoyikisa kokuqala kunye nexesha lokuya kusebenza nezikrufu ezincinci kunye ne-screwdriver ehambelanayo.
Umfowunelwa wokuqala kunye nokuseta
Ukuba ucinga ukuba ungasebenza ngesixhobo ngaphandle kokufunda imiyalelo, ndineendaba ezimbi kuwe. Into yokuqala endiyicebisayo kukuba ume okomzuzwana ufunde incwadi ukuba awufuni ukuba iSpaceball ibenayo ixesha elide kuzo zonke iikona zendlu yakho. Nje ukuba ucace ukuba isixhobo sisebenza njani, kufanelekile ukuba wenze iindiza ezithile "zokuqonda" ukufumana ulawulo lwedrone. Eyona nto inzima kukucinga ukuba ilawulwa ngokuchanekileyo kukuhamba kwesandla sethu hayi ngoyolo, eza kufuna ukuziqhelanisa.
Nje ukuba usifumene isixhobo, lixesha lokuba ukhuphe incwadi yomdlalo kwaye ulungele ukudibanisa ibhasikithi. Obu bunobungakanani obufanelekileyo bokungaphazamisi, ngokobuqu ndiyincamathisele ngeteyiphu emacala amabini efestileni, I-Spaceball ayinamandla akwaneleyo okuphula nayiphi na iglasi kwaye unokuba nexesha elimnandi eludongeni olungafakwanga olufana nefestile enkulu. Lixesha lokuba nexesha lokudlala i-Spacebasket Zerogravity.
Iimowudi zemidlalo ye-Spaceball Zerogravity
I-Spacebasket Zerogravity inenani elingenasiphelo leendlela ezahlukeneyo zomdlalo, kuyo incwadi epheleleyo yiza nakho konke ukusebenza, imidlalo, ukhuphiswano kunye neendlela zokuzonwabisa. Ewe unokwenza umdlalo wakho.
Ukhuphiswano lweMathematikaShiya idrone yakho ngaphezulu kwebhasikithi, yinike amandla, kwaye ugqibe ngokuchasene nehupula
Uvavanyo lwexesha: Izikhundla ezintathu zokudubula kumgama ohlukeneyo kunye namanqaku ahlukeneyo. Ude ufumane amanqaku, awuyi kwindawo elandelayo. Qhuba. Nabani na ofumana amanqaku aphezulu kwimizuzu emithathu ephumeleleyo.
Owona manqaku aphezulu: Kulula kwaye kumnandi. Esiqhelekileyo. Nawuphi na amanqaku amanqaku aphumeleleyo. Dlala imidlalo emangalisayo ngedrone yakho. Ugqibelele ukudlala usapho
freestyle: Dlulisa ibhola phantsi kwengobozi ngaphambi kokudubula, yenza iipirouettes, uyijikeleze. Amanqaku awanandaba apha, nabani na onikezela owona mboniso ubalaseleyo.
Nangona kunjalo, Kucacile ukuba ziimowudi nje ezibandakanya umdlalo ngokungagqibekanga kwaye sinokwenza ezi ngcebiso ngokulula, sidala eyethu imithetho, yokuba into ethile umdlalo ungowethu kwaye kuyaziwa ukuba abantwana banobuchule obungonelisekiyo. Nokuba kunjalo, umbono wokuba nexesha elimnandi lokudlala yizinyo elimnandi.
Eyona nto imbi kakhulu Ukuba awunamava okanye uceba ukuya kwixesha lokuqala uza kuthatha ukuphoxeka okukhulu, akukho lula ukulawula okanye ukudlala. Kwenzeka into efanayo nakubantwana, uninzi lwabo aluyi kuwuqonda umdlalo ngenxa yokuchaneka okufunekayo ngumlawuli, ke kuyacetyiswa kulutsha okanye kulutsha olunomdla olwaziyo into oluyiphetheyo.
Indlela eya eJuegrónica izisa kuthi ezi ntlobo zemidlalo zikhetheke ngokwahlukileyo kangangokuba zahluke ngokupheleleyo Njengoko kubonwe ukuza kuthi ga ngoku kwaye banokwenza ukuba abancinci ekhaya babe nexesha elihle enkosi kubuchwephesha.
Ngokuqinisekileyo umdlalo unomdla kwi-59,90 nangona kunokwenzeka ukuba kwiinyanga ezimbalwa izakuphela itshatyalalisiwe. Singasoloko sihlala sisiya kwiJugetrónica ngeendawo zokugcina. Ibhetri ihlala malunga neeseshoni zemizuzu eli-15 kwaye sinezimbini zazo. Lixesha lokuzama into eyahlukileyo, kwaye eBlusens sizamile yona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Spaceball Zerogravity, itekhnoloji edlalwa nguJugetrónica
Sivavanye i-E9, ii-headphone ezintsha ezingenazingcingo ezivela kumxube